पत्रकार पुडासैनीको मोबाइल रिकभर, रविलाई लागेको दुरुत्साहनको आरोप के हुन्छ ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
समाजमा सबैजना स-सम्मान रहनुपर्छ : एसपी बास्तोला
कोहलपुर तनावग्रस्त, कर्फ्यु लगाउने तयारी
१३ औं साग: नेपालका दुई खेलाडी फाइनलमा
...अनि बयान फेर्छन् पीडित महिला (तीन घटना पढ्नुहोस्)
१३ औं साग : फुटबलमा नेपाललाई जित या बराबरी आवश्यक, जित्नैपर्ने दबाबमा बङ्गलादेश
महिला मात्र शसक्त भएर समाज रुपान्तरण हुन्छ त ? (भिडियो)
बाँदर नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले छुट्यायो बजेट
भ्रमण वर्षमा पाँच हजारलाई होमस्टेदेखि चिनियाँ र रुसी भाषाको तालिम
पत्रकार पुडासैनीको मोबाइल रिकभर, रविलाई लागेको दुरुत्साहनको आरोप के हुन्छ ?
access_time२०७६ साल श्रावण २८ गते, मंगलवार ०१:१० PM chat_bubble_outline Comments folder_open सुरक्षा अपराध समाज
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले उनको मोबाइलका डिलेट भएका सबै म्यासेज, अडियो, भिडियो र तस्बिरसमेत रिकभर गरेको छ ।
चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले नेपाल प्रहरीको ल्याबबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा घटनाको अनुसन्धान गरिने बताए । उनले भने, 'मोबाइलबाट भएका सबै गतिविधि रिकभर हुन्छ । अडियो-भिडियो, टेक्स, भ्वाईस सबै विवरण प्राप्त भएपछि हामीले अध्ययन गर्छौं । अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।'
'मोबाइलबाट भएका सबै गतिविधि रिकभर हुन्छ । अडियो-भिडियो, टेक्स, भ्वाईस सबै विवरण प्राप्त भएपछि हामीले अध्ययन गर्छौं । अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।'
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय ल्याबले मोबाइलका सबै कुराहरु रिकभर गरिसकेको छ । ल्याबले मोबाइलका, म्यासेज, कल डिटेल्स, अडियो, भिडियो र तस्बिरसमेतको अध्ययनपछि अबको एक दुई दिन भित्र प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई पठाउने छ ।
नेपाल प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहन हो वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । ल्याब परीक्षणको प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मात्र चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले टर्चर दिएको वा नदिएको भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ । डिजिटल ल्याबमा पुडासैनीले आरोप लगाएका लामिछानेसँगको च्याट, अडियो र भिडियोको विषयमा सुक्ष्म अध्ययन भैरहेको छ ।
आत्महत्याको कारण लामिछानेको टर्चर भएको आरोप मोबाइलमा फेला परेको भिडियो रिपोर्टमा छ । पुडासैनीको मोबाइलमा फेला परेको अडियोभिडियो र च्याटको विस्तृत अध्ययनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले मोबाइल काठमाडौंमा रहेको नेपाल प्रहरीको डिजिटल ल्याबमा पठाएको थियो ।
मोबाइलमा फेला परेका सन्देशमा एक महिलाका विषयमा पत्रकार लामिछाने र दीपक बोहराले धेरै नै टर्चर दिएको आरोप छ ।
ती महिलालाई विवाह गर्न बाध्य पार्ने वा बलात्कार गरेको आरोप लगाउने धम्की दिएपछि आफूले आत्महत्या गरेको पुडासैनीको भिडियो सन्देशमा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन् ।
तर पत्रकार लामिछानेले आफ्नो कारणले उनले आत्महत्या नगरेको दावी गरेका छन् । पुडासैनीको मोबाइलमा रेकर्ड गरिएका दुई वटा ८ मिनेट र ३ मिनेटका रिपोर्ट फेला परेको थियो ।
पत्रकार पुडासैनी साउन २० गते सोमबार चितवनको नारायणगढस्थित होटेल कङ्गारुमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए ।
दुई महिना अघिसम्म न्युज २४ मा कार्यरत पत्रकार पुडासैनी केही दिनदेखि माउन्टेन टेलिभिजनका कार्यरत थिए ।
लागूऔषध बनाउने रसायन सहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ
कोहलपुरमा ट्रकले विद्यार्थी किचेपछि आगजनी, प्रहरीद्वारा हवाई फायर
ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षकको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)